Global Voices teny Malagasy » Mitady Fanampiana Ho An’ireo Niharam-boina Noho Ny Rivodoza Sidr Ireo Blaogy Bangla · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Avrily 2018 6:43 GMT 1	 · Mpanoratra Aparna Ray Nandika Candy
Sokajy: Bangladesh, Mediam-bahoaka, Voina, Vonjy Voina
Mandritra izany fotoana izany, misaringotra atsy sy aroa ireo mpamonjy voina, miezaka mitady sakafo, fanafody, rano fisotro, sns ho an'ireo tràboina tamin'ilay rivodoza. Kanefa, betsaka no mila atao amin'izany ary ato ho ato. Mandona haingana sy misafoaka ny tontolon'ny blaogy Bangla, miezaka mandrindra ny fanampiana ho an'io trangan-javatra io. (Sary natolotr'i Sujan )
Niantso ireo olom-pirenena bangla rehetra ny Blaogera Aurangzeb  hanadino ny fahasamihafana ara-politika ary hiasa miaraka mba hanarenana ireo niharam-boina tamin'ny rivodoza. Naverin'ny blaogy korbojoy  ireo teny sy fihetsehampony.
Notsindrian'i Nighat tithi  fa efa imbetsaka i Bangladesh no niady tamin'ireo loza voajanahary – na izany, ireo tondradrano miverimberina, na ilay rivodoza nahafaty tamin'ny taona 1991 na i Sidr amin'izao fotoana izao (2007).
Raha mbola hitohy hatrany ny tolona ato anatin'ny andro vitsy ho avy, niangavy ny rehetra ilay blaogera mba hanao izay vitany ho an'ireo niharam-boina ankehitriny vokatr'i Sidr. Nampahafantarin’ i Ishtiaq Rouf  taminay ny fomba nanangonan'ireo Bangladeshi mpianatra avy ao Virginia Tech ny fanampiana avy amin'ny Paypal ary ny fomba hahafahan'ireo hafa mandefa ny fandraisany anjara ho amin'ny fanampiana mitovy amin'io. Blaogera hafa toa an-dry Irteza , Addabaj  sy Biborno Akash  ihany koa nitondra ireo rohy fanampiny ho an'ireo fikambanana/ tranonkala izay ahafahan'ny tsirairay manao fanampiana ho famonjena raha misy loza voajanahary. Niresaka mikasika ny filàna fanaovana fanentanana sy fanamafisana ny fahatsiarovantena i Farukh Wasif  , mikasika ireo sosokevitra isankarazany momba ny asa famonjena / fanampiana mifandraika amin'ireo loza voajanahary.
Fanampin'izany, nanisy rohy nankamin'ny lahatsary iray amin'ny blaogy  (En), nataon'i Sheril Kirshenbaum, i Biborno Akash, izay nangatahan'ny tanora iray mpahay ny biolojia an-dranomasina, avy ao amin'ny anjerimanontolon'i Duke, Etazonia, tamin'ireo mpijery mba hanatevina laharana amin'ny asa fanarenana.
Etsy andaniny, tonga saina ilay blaogera Tirondaz  fa mbola niankina betsaka tamin'ny fanampiana iraisam-pirenena i Bangladesh isaky ny mitranga ny loza voajanahary, raha toa i India mpifanolo-bodirindrina aminy miezaka tsikelikely mahazo hery hiatrehana an'ireo loza ao aminy – sahala amin'izay nataony fony nikapoka ny firenena ny tsunami tamin'ny taona 2004. Manantena izy fa ho avy tsy ho ela ny fotoana izay hahavitan'i Bangladesh tena koa, toa an'i India mikasika ireny olana ireny.
Ny sehatra fanaovana blaogy Bangla Somewherein , miaraka amin'ny Save the Children , no nandefa fanentanana “Jagoron” nampiasàna ny SMS (izay midika ara-bakiteny hoe “ny fifohazana”) mba hahafahan'ireo olona monina ao Bangladesh ho tonga hanampy an'ireo niharam-boina vokatry ny rivodoza Sidr.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/25/117878/
 Blaogera Aurangzeb: http://www.somewhereinblog.net/blog/awrangjebblog/28745924
 lahatsary iray amin'ny blaogy: http://scienceblogs.com/intersection/2007/11/from_sheril_bangladesh_needs_y.php